Goolkii hore ee Bernard waa farqi maadaama Everton ay Watford ka ilaaliso | 1xbet
Goolkii hore ee Bernard waa farqi maadaama Everton ay Watford ka ilaaliso
December 16, 2016 Sport
Difaaca ayaa ahaa waaxda kaliya ee Everton aysan maal gashan xagaagan, Marco Silva ayaa galay ololahan cusub isagoo muujiyay walaac ku aadan maqnaanshaha qeybta dhexe ee natiijada. Ma uusan hayn wax sabab ah oo ashtako ah tan iyo markaas. Safka hore ee Everton ayaa aasaas u ahaa guushoodii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkaan iyo dadaalkii weynaa ee Watford oo aan abaalmarin la siinin. goolka hore ee Bernard.Sadio Mané ayaa ku soo laabtay hudheelka Saints wuxuuna Liverpool ka caawiyay in ay guul gaarto halkaan ka aqriso iska caabinta duulaanka cirka ka dib duulaanka cirka, ciddiyaha cidiyaha ayaa ka isticmaal badnaa calanka loo yaqaan ‘Goodison aamin’. Kooxdooda ayaa u muuqatay mid burbursan laakiin guul ka soo hoyatay tartan adag oo ay soo wada ciyaareen Jordan Pickford, Michael Keane iyo Yerry Mina. Ciyaaraha, soo laabashada waxaa ku wanaagsan kaliya Manchester City.Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil ayaa dhex mushaaxay gudaha Kiko Femenía wuxuuna ku garaacay Ben Foster isagoo si hoose ku dhameystay birta dhexdeeda. Si fudud ugu garaac isaga, run ahaantii, in kasta oo waxyar uun laga taabtay Craig Dawson oo u socday goolka. Facebook Twitter Pinterest Moise Kean oo Everton ah ayaa toogtay goolka ka dib markii uu bedel ku soo galay kulankiisii ​​ugu horeysay ee kooxda. Sawir: Paul Greenwood / BPI / Shutterstock
Pickford ayaa soo saaray badbaadin kale oo fiican si looga hortago in Troy Deeney uu barbaro galo qeybta labaad. Fursadu waxay ka timid mid ka mid ah khaladaad dhowr ah oo uu sameeyay Richarlison, kaasoo si cad uga hor yimid kooxdiisii ​​hore, kaliya inuu ku ciyaaro baas aan taxaddar lahayn gudaha Doucouré.Deulofeu ayaa daafaca Everton ku kala qeybiyey kubad culeyskeedu dhan yahay laakiin Pickford ayaa si deg deg ah u xiray Deeney isla markaana si geesinimo leh ugu xiray barta wejiga banaan ee wajigiisa. ee Everton, laakiin Watford ayaa ahayd kooxda ugu xoogan qeybtii labaad. Keane iyo Mina waxay cadeeyeen caqabado ma guurto ah martida ayaa inkasta oo ay muujiyeen horumar balaaran oo ku aadan wax qabadkii usbuucii la soo dhaafay ee kulankii Brighton, hadana mar kale ayey faro madhan ka baxeen.
Lucas Moura ayaa kasbaday Spurs barbarihii Manchester City iyadoo taariikhda VAR ay soo noqnoqoneyso
Bolton ayaa dib u dhigtay ciyaar League One ah oo ay lajirto Doncaster sababo la xiriira walaac ‘daryeel’
Lixda Xul ee tartanka: Wales iyo England ayaa xukuma XV -da ugu fiican
1xbet pariuri online Romanie
Awood darrida nidaamka shirweynaha AFLW ayaa la soo bandhigay dhammaadkii wiigga u dambeeyay
Khilaafyada taxanaha ah ee dhawaanahan ma ka dhalan karaan codka kalsoonida BHA?
Xagaaga xagaaga kadib, yaa xukuma NBA-da?
1xbet English – https://bet-so.top
1xbet Azərbaycan – https://bet-so.top
1xbet Afrikaans – https://bet-so.top
1xbet ኣማርኛ – https://bet-so.top